Sawirro: Itoobiya iyo Ereteriya oo maanta heshiis taariikhi ah ku kala saxiixday magaalada Jeddah – AwKutub News
Sawirro: Itoobiya iyo Ereteriya oo maanta heshiis taariikhi ah ku kala saxiixday magaalada Jeddah
Leave a Comment on Sawirro: Itoobiya iyo Ereteriya oo maanta heshiis taariikhi ah ku kala saxiixday magaalada Jeddah
Dalalka Ereteriya iyo Itoobiya ayaa maanta heshiis taariikhi ah ku kala saxiixday magaalada Jeddah, halkaasi oo loogu qabtay munaasabad uu goobjoog ka ahaayeen boqor Salman Bin Cabdulcaziiz iyo wiilkiisa ahna dhaxal-sugaha Maxamed Bin Salman.
Waxa sidoo kale munaasabadda joogay xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Gutteres iyo wasiirka arrimaha dibedda Imaaraadka Carabta Abdullah bin Zayed Al-Nahyan, kuwaasi oo dhammaantood daawanayey ayada ay heshiiska qalinka ku duugeen ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Eretariya Isiais Afwerki.
Wasiirka arrimaha gudaha Sacuudiga Abdulaziz bin Saud bin Nayef, wasiirka arrimaha dibedda Adel Al-Jubair iyo wakiilka boqortooyada Sacuudiga ee Qaramada Midoobay Abdullah Al-Maalami, ayaa sidoo kale ka qeyb-galay xafladda
Heshiiskan ayaa si rasmi ah loogu soo geba gebeeyey colaaddii 20-ka sano u dhaxeysay Itoobiya iyo Ereteriya, ayada oo Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ay lahaayeen fikraddii ka dambeysay in labadan dal la isku soo dhoweeyo.
Kadib saxiixa heshiiska, ayaa waxaa labada hogaamiye la guddoonsiiyey biladda boqortooyada Sacuudiga ee lagu magacaabo Order of King Abdulaziz.
Tags: Ereteriya heshiis Itoobiya Sacuudiga Wararka
Previous Entry Aqalka Sare muu xallin karayaa khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada?
Next Entry Erdogan iyo Putin oo kulmaya si ay uga wada hadlaan arrinta Suuriya